पार्टीको नीति, कार्ययोजना र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्न मेरो अध्यक्षमा उम्मेदवारी होः हर्कबहादुर नेम्बाङ उर्फ मिक्सो
पार्टीको नीति, कार्ययोजना र वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्न मेरो अध्यक्षमा उम्मेदवारी होः हर्कबहादुर नेम्बाङ उर्फ मिक्सो ‘सरकार र पार्टीको समस्य हल गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छु’
हाेम बस्नेत शनिबार, पुस ३, २०७८
उदयपुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ को पहिलो अधिवेशनले प्रदेश समितिमा २५९ जना सदस्य सर्वसहमत चयन गरेको छ । माओवादीको विधानअनुसार अब २५९ जना प्रदेश सदस्यबाटै पदाधिकारी चयन हुने छ । पदाधिकारीमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक सचिव, तीन सह–सचिव र एक कोषाध्यक्ष हुने छ । यसभन्दा अघि प्रदेश १ अध्यक्षको दाबी गरिरनु भएका केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेशकुमार राई (हिमाल), इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम) र हेमराज भण्डारी (सुदर्शन)ले फिर्ता लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरुले गएको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा आफ्नो अध्यक्षमा भएको दावेदारी फिर्ता लिनु भएको हो । तीनै जनाले छाडेपछि अध्यक्ष बन्ने आकांक्षीको संख्या बढेको छ । आउने पुस ७ गतेसम्म पदाधिकारीको टुंगो लगाउन ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । तर, यता उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लर्को लागेको छ । अध्यक्षमा मात्र आधा दर्जनबढी नेताहरुले दाबी गर्नु भएकाे छ । अन्य पदाधिकरीमा पनि दाबी गर्नेको संख्या धेरै छ । यहीक्रममा अध्यक्षमा दाबी गरिरहनु भएका माओवादी आन्दोलनका एक कुशल कमाण्डार तथा हाल प्रदेश १ सदस्य हर्कबहादुर नेम्बाङ उर्फ मिक्सोसँग जनभावकर्मी होम बस्नेतले अध्यक्षमा दाबी के का लागि ? यदी अध्यक्ष बनेको खण्डमा प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले कसरी गति लिन्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेको गर्नु भएको छोटो कुराकानी प्रस्तुत छ ।
तपाँइले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ को अध्यक्षमा दाबी गर्नुको मुख्य कारण के के हुन् ?
पहिलो कुरो, पार्टी लिएको नीति तथा कार्यक्रम र योजनालाई प्रदेश १ मा कार्यन्वय गर्न नै हो । दोस्रो नम्वरमा, पार्टी अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) ले अघि सार्नु भएको समाजवादी कार्यक्रममा, आर्थिक सम्बृद्धि र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने पार्टीको लक्ष्यलाई कार्यन्वय गर्न हो । तीन नम्वरमा हालसम्म संगठनको नेतृत्वमा एकप्रकारको ब्रेक थ्रु चाहिएको छ, ब्रेक थ्रु काे सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र हुदाँ एक प्रकारको ब्रेक थ्रु हुनसक्छ । अर्थात नेतृत्वमा नयाँ पन आउन सक्छ भनेर अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी हो । अध्यक्षमा मेरो दाबी हो । जनयुद्धदेखि आएका, पछि पार्टी एकता गरेर आएका, जनयुद्धमा घाइते भएका, सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार सबैलाई एकताबद्ध गर्नको लागि पनि, मेरो अध्यक्षमा उम्मेदवारी हो । समग्रहमा पार्टीले लिएको नीति, कार्ययोजना, वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी हो भन्न चाहान्छु ।
यदी अध्यक्ष बनेको खण्डमा प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अन्य पार्टीभन्दा शक्तिशाली बनाउने योजनाहरु के के छन् ?
प्रदेश १ को नेतृत्वमा ब्रेक थ्रु जरुरी छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यक्रमसहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ नेतृत्वको लागि समाजवादी कार्यक्रमलाई कार्यन्वय गर्ने खालको हुनुपर्छ । विचार र संगठनलाई जनतसामु लिएर अघि बढ्ने हुनुपर्छ । यही योजनाले हामीले लिएका लक्ष्य उदेश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
अब हुने स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश १ मा अन्य पार्टीभन्दा माओवादी केन्द्रले संख्यात्मक रुपमा धेरै सिट जित्छ ?
अब हुने निर्वाचन झण्डै एक वर्ष भित्र हुने छ । यो छोटो समय छ । तर, पनि अन्य प्रतिस्प्रर्धि पार्टीसँग माओवादी केन्द्रलाई उभ्याँउने योजनाहरु ल्याइने छ । त्यही अनुसारका कार्ययोजनाहरु कार्यन्वय गरिने छ । संगठात्मक, राजनैतिक, वैचारिक योजनाहरु ल्याइने छ । यहाँ संख्यत्मकभन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्प्रर्धि पार्टीसँगै उभ्याउन जरुरी छ ।
अहिले पनि तपाँइ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । सरकार र पार्टीलाई समन्वय गरेर जनतासामु कसरी लगिरहनु भएको छ ? सरकार र पार्टीको समन्वय मिलेको त देखिँदैन ?
प्रदेश १ मा सरकार र पार्टीको समन्वय अलि नमिलेको जस्तो देखिन्छ । पार्टी र सरकारको अन्तरविरोध जस्तो पनि देखिन्छ । पार्टी र सरकारलाई अन्तर सम्बन्धित बनाएर, एक अर्काका परिपुरक बनाएर, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकारका कार्यक्रमहरु पार्टीका उदेश्य अनुरुप लैजाने, पार्टी र सरकारको समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ । अहिले देखिएको सरकार र पार्टीको समस्य हल गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छु । पार्टी र सरकार परिपुरक बन्नुपर्छ । बनाउने छु ।
त्यसो भए, तपाँइ अध्यक्ष बन्ने पक्का पक्की नै हो त ?
अहिले त, धेरै साथीहरुले दाबी गर्नु भएको छ । विभिन्न पदाधिकारीमा दाबी गर्नु भएको छ । सबै साथीहरुको उम्मेदवारीलाई म सम्मान गर्छु । उहाँहरुको अधिकार पनि हो । उहाँहरुको अध्यक्षमा दाबी गर्ने, विभिन्न पदाधिकारीमा दाबी गर्ने हैसियत पनि हो । उहाँहरुलाई सम्मान गरेर पार्टीको काममा सँगै लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दै अध्यक्षमा सम्भवत मेरो नेतृत्व हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । यस सन्दर्भमा सिंगो प्रदेश पार्टी नेतृत्व, सिंगो कार्यकर्ता पंक्ति र उपल्लो नेतृत्व तहले पनि सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अध्यक्षमा तपाँइको नाम सर्वसहमतै हुन्छ त ?
सर्वसहमत हुने कोसिस गर्छु । सबै साथीहरुलाई कन्भिक्स गर्छु । यदी नभएको खण्डमा चुनाव हुन्छ । प्रक्रियामा जानु पर्छ । पार्टी विधानले पनि त्यही निदृष्ट गरेको छ । ‘प्रक्रियामा जाने कुरामा पनि म त, तयार छु । सर्वसहमत नभए चुनाव हुन्छ । त्यस चुनावमा पनि साथीहरुले साथ दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
भोलिका दिनमा माओवादी आन्दोलनको मुमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
हामी अहिले अलि फरक परिवेशमा छौँ । हामी हिजोकाे ठाउँमा छैनौँ । नयाँ प्रक्रियामा छौँ । हामीले नयाँ नीति तथा कर्यक्रम बनाउनु पर्छ । अहिलेको पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो भने, नयाँ योजना, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । माओवादीले मात्र अहिलेको बदलिदो समाजलाई, विकसित नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्छ । त्यस कारण माओवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउन जरुरी छ । माओवादी आन्दोलन हिजोको ठाउँमा होइन, नयाँ ठाउँमा पुग्नु पर्छ । माओवादी आन्दोलनले हिजो अघि सारेको एकाईशौँ शताब्दीको जनवाद, प्रचण्डपथ लगायत नेतृत्व केन्द्रकरण सम्बन्धीका विषयहरु छन् । त्यसलाई नयाँ ढंगले, नयाँ ठाउँबाट प्रशिक्षिति गरेर अघि बढाउन जरुरी छ । सम्भवत हाम्रो प्रदेश सम्मेलनहरु सम्पन्न हुन लागेका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदै छ । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विचारलाई थप शंसलेष्ण गरेर, संगठनलाई केन्द्रिकरण गरेर अबको माओवादीलाई नयाँ गतिसहित, नयाँ उर्जासहित, नयाँ उत्साहासहित अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वस्त छु ।
##नेकपा# ##माओवादी# #केन्द्र# #प्रदेश१# #अध्यक्ष
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ३, २०७८, ११:३६:००